Nhọrọ kacha mma maka AirPlay maka gam akporo | Androidsis
Ọ bụrụ na ị na-ele anya uzo ozo di na AirPlay site na Apple maka gam akporo, ihe mbụ ị kwesịrị ịmara bụ na, ebe ọ bụ teknụzụ Apple nwere nke na -anaghị enye ndị ọzọ ikike, ọ gaghị ekwe omume iji ya na ngwaọrụ Apple emepụtaghị, ọ bụrụ iPhone. , iPad, Apple TV, iPod ma ọ bụ Mac.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere Apple TV, ịnweghị ike iji usoro nkwukọrịta Apple a. ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ apụl (iPhone, iPad, iPod aka ma ọ bụ Mac). Ịkwesighi ịnọgide na -enyocha ịntanetị ka ị nwere ike iji AirPlay na ama gam akporo, ọ nweghị ụzọ enwere ike isi mee ya.
1 Gịnị bụ airplay
2 Nhọrọ ndị ọzọ na AirPlay
2.1 Ntugharị Google
2.4 Iji eriri jikọọ na TV
2.5 Iji kọmputa ejikọrọ na ama
Gịnị bụ airplay
Ka anyị bido na mbido. AirPlay bụ usoro nkwukọrịta ikuku (na -enweghị eriri) na -enye ohere na -enuba ọdịyo, eserese na vidiyo site na iPhone, iPad, iPod touch, ma ọ bụ Mac na Apple TV. Ruo ntakịrị ihe karịrị otu afọ gara aga, Apple enyeghị ndị nrụpụta ndị ọzọ ikike teknụzụ a.
Apple enyela teknụzụ a ikikere ndị na -emepụta smartphone (Smart TV) Samsung, LG na Sony yana onye nrụpụta telivishọn na -ere naanị na United States. Ndị nrụpụta ndị a na -enye nkwado AirPlay na telivishọn ha ọ bụghị na ekwentị mkpanaaka ha.
Ụlọ ọrụ Cupertino enyekwara ikikere iji teknụzụ a ruo afọ ole na ole ụfọdụ ndị na -emepụta ọkà okwu mara mma, Sonos bụ onye nrụpụta ama ama ama. N'èzí smart TV na gburugburu ebe obibi ọkà okwu, ọ nweghị ngwaahịa ọzọ n'ahịa na -akwado AirPlay.
Nhọrọ ndị ọzọ na AirPlay
Ozugbo anyị doro anya banyere ihe teknụzụ AirPlay na otu o si arụ ọrụ, ọ nwere ike bụrụ na ị bịaruo nkwubi okwu ahụ na gam akporo anyị nwere usoro nkwukọrịta yiri yaN'ime nke Google Cast, Miracast na DLA pụtara, abụọ ndị ikpeazụ bụ ndị kacha ochie na ndị anaghị eji taa, mana na -enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu arụmọrụ.
Ọ bụrụ na TV gị na -akwado AirPlay, otu a bụ Google Cast na Miracast na DLNA, yabụ ịnwa ịchọta ngwa na -adịghị adị iji AirPlay site na ekwentị gam akporo gị enweghị isi, ihe anyị ga -eme bụ iji usoro dị na gam akporo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ izipu onyonyo ma ọ bụ vidiyo na ihuenyo telivishọn gị ma ọ bụ Igbe gam akporo, ị nwere ike mee ya site na iji usoro ndị a ma ọ bụ jiri ngwa ọ bụla dị na Storelọ Ahịa Play maka ebumnuche ndị a, ngwa na -arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka AirPlay.
A na -akpọ AirPlay nke Google Google Cast, Nkwekọrịta Google naanị nke dịkwa na ụfọdụ igwe onyonyo smart, BOX Android, na ndị ọkà okwu maara ihe.
Ọrụ nke Google Cast bụ otu AirPlay.
Emegharịla Google Cast na Chromecast. Chromecast bụ ngwaọrụ na -agwakọta teknụzụ Miracast na DLNA n'otu ngwaọrụ ma na -eji usoro Google Cast. Chromecast abụghị usoro nkwukọrịta n'otu n'otu dịka Google Cast, AirPlay, Miracast ma ọ bụ DLNA.
Usoro nkwukọrịta Miracast kụrụ ahịa ka ọ bụrụ Ezigbo nnọchi maka njikọ HDMI mana enweghị eriri. Usoro iwu a na -enye anyị ohere izipu ọdịnaya na -enweghị eriri na ogo HD zuru oke yana ụda gbara ya gburugburu, ebe AirPlay na Google Cast na -enye anyị ohere izipu ọdịnaya na ogo 4K.
Mgbe anyị na -ekerịta ọdịnaya site na ekwentị anyị site na Google Cast ma ọ bụ site na AirPlay (ọ bụrụ na ọ bụ ngwaọrụ Apple), enwere ike gbanyụọ ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ ebe akụrụngwa na -aga n'ihu na -arụ ọrụ n'okirikiri.
Nke a anaghị eme na MiracastNke a bụ otu n'ime isi butto nke usoro a, n'agbanyeghị na igosi ọdịnaya n'ime usoro vidiyo anaghị adịte aka ma ọ bụ igosi foto, ọ ga -adị mma karịa iji eriri ejikọrọ na telivishọn.
DLNA bụ otu n'ime usoro nkwukọrịta izizi wee banye n'ahịa kerịta ọdịnaya n'etiti ngwaọrụ dị iche icheN'agbanyeghị nke a, a ka na -eji ya taa, ọkachasị ịkekọrịta ọdịnaya sitere na kọmpụta.
A na-eji usoro a nweta ọdịnaya echekwara na ebe dị anya na ngwaọrụ ndị ọzọ ejikọrọ na otu netwọkụ, ọ bụrụ ama ama, draịvụ ike mpụga, NAS, kọmpụta ... N'ihe banyere smartphone, anyị ga -emepe ngwa wee debe ya na ndabere.
Iji eriri jikọọ na TV
Ọ bụrụ na TV gị dị afọ ole na ole ma ị nweghị ebumnuche imelite ya n'ime afọ ole na ole sochirinụ iji teknụzụ ọhụrụ dịnụ maka ịkekọrịta ọdịnaya n'ime ime, ihe ngwa ngwa na nke kachasị mfe bụ jiri eriri ejikọrọ n'ọdụ ụgbọ mmiri HDMI nke telivishọn anyị.
Dabere na ụdị ama, ọ bụrụ na o nwere njikọ USB-C, na Amazon anyị nwere ike zụta USB-C ọ bụla na eriri HDMIEbe ọ bụ na ejighị njikọ USB-C naanị iji chajịa ngwaọrụ, ọ nwekwara ike ibunye ọdịyo na vidiyo ọnụ.
Ọ bụrụ na ọdụ ụgbọ gị emeela okenye ma ka na-eji ọdụ ụgbọ mmiri micro-USB, ị nwere ike zụta eriri, yana Amazon, site na Micro-USB ka HDMI, mana nke mbụ ị ga -enyocha ma ngwaọrụ gị ọ dabara na ọrụ OTG, ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike imepụta onyonyo nke ekwentị gị na TV.
Jiri eriri bụ ngwọta dị ọnụ ala na ọ bụ naanị nke na -ewepụ ụdị nkwụsị ọ bụla nke anyị nwere ike ịhụ na usoro nkwukọrịta ikuku ndị ọzọ m kwurula n'isiokwu a.
N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịnụ ụtọ egwuregwu nke ọnụ ọnụ gam akporo anyị na ihuenyo buru ibu, jiri eriri gaa iwepụ lag bụ nhọrọ kacha mma.
Iji kọmputa ejikọrọ na ama
Ọ bụrụ na ị nwere kọmpụta dị nso na telivishọn gị, akụrụngwa ị na -eji ekiri ihe nkiri ma ọ bụ nweta usoro vidiyo dị iche iche gụgharia, ị nwekwara ike gbanwee ya ka ọ bụrụ onye nnata Google Cast site na ngwa AirServer ma ọ bụ 5KPlayer, nke ikpeazụ a bụ n'efu mana ọ naghị enye anyị otu ụdị nke anyị nwere ike ịhụ na AirServer.
Site na itinye ngwa ndị a nkwado maka Google Cast, anyị nwere ike zipu ọdịnaya site na ama anyị ozugbo na kọmputa ejikọrọ na TV, iji kirie vidiyo anyị dekọrọ, foto ma ọ bụ gwuo egwuregwu na ihuenyo ka ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » The kacha mma uzo ozo ka airplay maka gam akporo
Etu esi edozi nsogbu APPCRASH